Cctv Camera Heat Film China Manufacturers & Suppliers & Factory
Cctv Camera Heat Film - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Cctv Camera Heat Film)
Nke a PTC Seedling Heat Mat bụ tumadi ka a ga - eji mee ihe na - emetụ ọkụ na Seeding Germinatedto. PTC Seedling Heat Mat bụ mkparị nke Positive Temperature Coefficient, nke pụtara na smart ngwaahịa onye onye kpo oku na-achịkwa okpomọkụ ya onwe ya. Ihe nkiri na-ekpo ọkụ na ngwa ngwa ngwa ngwa gụnyere: griin kụrụ...
Bulldozer Heated Hand Grip Nkọwapụta ngwaahịa Ọkpụkpụ aka anyị na-ekpo ọkụ na- enye gị ohere ịmezi ọnọdụ ọkụ ọkụ ka ị gharazie ịnagide okpomọkụ. Ọ dị mfe iji dabara. Ngwa ngwa ikpo ọkụ. Nye gị ọkụ na oyi Voltage: 12.5v, ọrụ ahaziri iche Ike: 3.6 w, ọrụ ahaziri arụmọrụ Kwesịrị ekwesị maka ihe mgbochi niile na ọkọlọtọ...
PTC Heat Pad Agafe na infrared Mats 20 Gallon
PTC Heat Pad Agafe na infrared Mats 20 Gallon F035D N'okpuru Ulo Igwe Ulo Okpomọkụ UL Ndị E Dere Ihe
Cctv Camera Heat Film CCTV camera heat film Sauna Heat Film Carbon Heating Film 220v Sauna Heating Film Cedar Barrel Sauna Heat Film Sauna Theater Film Cute Pet Heat Mat